Ny zava-manitra any Sri Lanka ~ Journey-Assist - Fampisehoana sy sary. fampiharana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Masakan'i Sri Lanka » Ny zava-manitra sy ny zava-manitra
Ny zava-manitra lehibe ao Sri Lanka
Pepper mainty (Gam Miris)
Coriander / Cilantro (Koththamalli)
Bawangsy (Sudu Lunu)
Onion mena (Rathu Lunu)
Chilli Pepper (Velliche Miris)
Ceylon cinnamon (Kurundu)
Nutmeg sy Mace (Sadikka & Wasawasi)
Citronella / Lemongrass (Sera)
Curry (ravina Curry)
Spice Curry (kari)
Heverina ho vanim-potoana malaza indrindra. Ny ravina vaovao rehetra na ny tany maina dia ampiasaina. Ny ravina curry dia ampiasaina amin'ny fanomanana saika ny karazana kari rehetra.
Spice mainty dipoavatra
Any Sri Lanka, karazan-dipoavatra roa no maniry: mainty - voaroy tsy voaroy, izay arotsaka sy fotsy - voa masomboly voasarimakirana anana.
Ny kesika mainty avy any Lankan dia ahitana singa betsaka amin'ny piperine, noho izany dia misy fery sy manitra.
Ampiasaina na aiza na aiza izy io amin'ny fanomanana ny làlan-kavoana lehibe amin'ny endrika voanjo maina na vovony.
Coriander / Cilantro (Coriander)
Spice Coriander / Cilantro (Coriander)
Ny ravin'ny coriander (cilantro) dia ampiasaina vaovao amin'ny lasopy, salady ary ho ravaka haingon-trano ho an'ny lovia efa vita. Ny voankazo cilantro masirasira (coriander) dia ampiasaina amin'ny fanomanana lovia manitra.
Turmerika / Turmerika (Curcuma / Turmeric)
Mitovitovy amin'ny safotra amin'ny endrika sy endrika. Mba hamoronana vovom-boasary makirana iray, ny faritra voatoto-poton'ny zavamaniry dia ampiasaina. Ilaina izany amin'ny fanomanana kari.
Karazan-javamaniry telo no nambolena tao amin'ny nosy: malabar, Mysore ary Vazhukka. Ny kardamom dia ampiasaina amin'ny endrika maina sy tany rehetra, ary koa amin'ny endrika menaka. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanomanana lovia lehibe sy mamy, dite ary ampidirina amin'ny fanomanana lovia. Famadihana matetika ny confectionery, indrindra amin'ny pudding eo an-toerana Vatalappam.
Manitra avy amin'ny volombava maina tsy misokatra. Ny fonon-tanana nivelatra tao amin'ny afovoan'i Sri Lanka dia ahitana menaka be dia be, izay manavaka azy amin'ny sarivongan-dombo maniry any amin'ny firenena hafa. Vokatry ny vokatra farany dia ampiasaina ny menaka jiro ary toy ny zava-manitra.
Ny menaka volom-boady dia ampiasaina hanaovana kari: atsofohy amin'ny ghee ghee. Ao amin'ny fandrahoan-tsakafo dia ampiasaina amin'ny fanamboarana lovia hena sy lovia vary.
Tongolo gasy (tongolo gasy)
Spice Garlic (Bontika)
Voankazo sy saro-bidy ary tsy matsiro. Saika ampiasaina foana amin'ny fanomanana lovia lehibe amin'ny sakafo L Sri Lanka. Anisan'izany ny kari, ny vary nendasina, ny saosy trondro sy ny sisa.
Ratu Moon (Rathu Lunu)
Bizina mena (sibika mena)
Mena ny volon'osy dia mena ary somary matsiro ary tsy maranitra amin'ny afovoany antitra. Ao amin'ny fandrahoan-tsakafo an-toerana dia ampiasaina amin'ny toerana rehetra ny fanomanana ny lovia lehibe. Anisan'izany ny snacks malaza Sambol, salady sy ny sisa.
Ny poavatra Chili dia hita amin'ny karazany maro karazana mena sy maitso. Ny sokola mena dia matetika ampiasaina amin'ny vovon-javamaniry na ampahany kely, amin'ny endrika maina sy atody. Voasary mavokely maitso no ampiana vaovao, atody, hanomezana ny zava-manitra sy ny fahamasinana amin'ny lovia.
Kesika maintso maitso dia ampiasaina hanaovana salady sy sakafo maivana. Toy ny fitsipika, ny voa dia tsy esorina amin'ny hena maintso. Zavamaniry mena no ampiasaina amin'ny fanomanana ny lovia lehibe amin'ny endrika maodely iray na mifamatotra miaraka amina rano na vinaingitra.
Ny mustard mainty dia tena maranitra sy manintona. Ampiasaina amin'ny endriny manontolo na tany manontolo. Ampio amin'ny maro lesona lehibe Lutu Sri Lanka. Ao anatin'izany ny hena, trondro sy lovia legioma, salady ary sakafo maivana.
Spice cinnamon (kanelina)
Sri Lanka no mpamokatra lehibe indrindra amin'ny kanelina tsara indrindra eto an-tany. Ity masira ity dia ampiasaina amin'ny endrika menaka, vovony na amin'ny endrika tapa-kazo rehetra. Amin'ny fandrahoan-tsakafo dia ampiasaina amin'ny fanomanana tsindrin-tsakafo, hena sy lovia trondro.
Any Sri Lanka, karazam-boankazo roa karazana no maniry: mainty sy mavo. Ampiasaina amin'ny endrika manontolo sy tany ny voa masom-boankazo mainty sy mavo. Ny voa mando (Suduru) mavo dia ampiana amin'ny kari. Ny komina mainty (Maduru) dia manana tsiro matsiro, noho izany dia ampiasaina ho toy ny zava-manitra amin'ny fanomanana tsindrin-tsakafo sy amin'ny zava-pisotro misy alikaola isan-karazany.
Spice Ginger (Ginger)
Ny fakany mihina dia azo ampiasaina vaovao, pickles ary maina. Ny fakany voajinja dia voajinja matetika amin'ny masoandro ho an'ny fitahirizana lava kokoa.
Matetika ampiasaina amin'ny fanaovana dite, ary koa ny lovia Aziatika sy ny fanomanana curries.
Ampiasaina amina fahandroana eo an-toerana ny sokay. Ampidirina amin'ny tsindrin-tsakafo, fitafy salady, saosy isan-karazany, sns. Manome hanitra sy zava-manitra mahafinaritra amin'ny lovia izany, mampiditra tsiro amin'ny lovia.
Spice Vanilla (Vanila)
Ny voninkazo vanily orkidra, toy ny tsaramaso maitso, dia tsy misy fofona mangirana.Nahazoana volontany mainty, saika mainty ary ny fofona mampiavaka, volana fikarakarana, famafana ary maina. Vanila dia mila fanodinana manual, izay mitarika ny vidiny lafo. Ampiasaina amin'ny endriky ny menaka (vanillin), vovoka, na sakamalaho manontolo.
Ampiasaina amin'ny fahandroana eo an-toerana. Vanila dia ampidirina amin'ny tsindrin-tsakafo, pasta ary zava-mamy hafa.
Sadikka & Vasawashi (Sadikka & Wasawasi)
Nutmeg sy Mace dia zava-manitra roa samy hafa avy amin'ny zava-maniry mitovy, miovaova ny tsirony. Ny Nutmeg no tena fototry ny voankazo, ary ny molotra no akorany ivelany amin'ny voany.
Nutmeg dia ampiasaina amin'ny fanomanana ny mofomamy sy ny lovia mamy, amin'ny fiarovana, ary ny hena sy ny lovia trondro, ao anaty kari, sns.
Ahitra manitra (Lemon ahitra)
Citronella dia voasarimakirana iray, ahitra tsy misy fangarony izay ahiditry ny ravina misy menaka ilaina ao anaty ny voasarimakirana iray.
Ny menaka Citronella dia ampiasaina ho harato moka, ary ny citronella vaovao dia ampiasaina ho toy ny zava-manitra amin'ny fanomanana hena sy trondro. Any amin'ny tany sasany, ny ahitra Schisandra maina dia ampiasaina amin'ny fanaovana zava-pisotro sy zava-maniry. Ny Citronella dia ampiasaina ihany koa amin'ny fofona, alohan'ny maina sy ny tany ho lasa vovony.
Spice Tamarind (Tamarind)
Tamarind dia zavamaniry amin'ny fianakaviana legume. Ny derivaly ho an`ny zava-manitra dia ao anaty polony ary manana tsiro mamirapiratra - manomboka amin'ny mamy mamy ka mamy. Ho an'ny famokarana ny zava-manitra mihitsy, dia ny voan'ny tsilo sy ny pulp izay itoerany no ampiasaina. Matetika ny voa dia manandrana mamy, ary ny nofo dia mety mamy na mamy.
Tamarind dia mampiditra ny sakam-boankazo matsiro amin'ny lasopy, salady, french fries ary saosy, izy io dia singa amina karazana kari be, anisan'izany ny trondro.
Spice Dill (Dill)
Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny endriky ny voa amin'ny fanomanana amina lovia any Sri Lankan, ary koa amin'ny endrika vaovao hamoronana fampianarana sy salady faharoa.
Fenugreek voa dia volontany volamena amin'ny endrika mahitsizoro, manana tsiro mangidy, saingy singa manan-danja amin'ny curry, manome ny tsirony notadiavina ary miasa toy ny matevina.
Fahadisoana miaraka amin'ny dill ...))) Fennel dia voan-tsasaka izay manana tsiro an-may mahery. Ny ravin'ny zavamaniry ity dia mitovitovy amin'ny dill, saingy manana ny tsirony amin'ny anise.
Nanao ireo fiovana ilaina!